Madaxweynaha oo u hambalyeeyay Guddoonka cusub ee Baarlamaanka
Madaxweynaha oo u hambalyeeyay Guddoonka cusub ee Baarlamaanka Mogadishu Arbaco 29 August 2012 SMC
(Mogadishu, Somalia, Aug. 29, 2012) Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa u hambalyeey guddoonka cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya isagoo dhinaca kale tallaabo taariikhi ah ku tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay 42 sano kaddib ku guuleystaan inay baarlamaan ku doortaan waddankooda.
Shir jaraa’id oo ay si wada jir ah u qabteen madaxweyne Shariif, guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen iyo guddoomiyihii KMG ahaa ee Baarlamaanka, ayuu madaxweyne Shariif ku sheegay in howl wanaagsan ay qabteen mudaneyaasha Baarlamaanka iyo guddigii doorashada isla markaana la doonayo in howsha dhimman la dhammeystiro.
“Waa taariikh cusub oo Soomaaliya u bilaabaneysa, waxaana rajeyneynaa hadduu Alle idmo inay sidaas isu dabo socoto, dowladda soo socotana ay noqoto middii Soomaaliya ay uga baxeysay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee soo gaaray, horumarka jirana dhammeystiri lahayd” ayuu yiri madaxweyne Shariif Sheekh Axmed.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Cismaan Jawaari oo shirka jara’id ka hadlay ayaa sheegay in doorashadii dhacday ay ahayd mid taariikhi ah, baarlamaanka cusubna uu yahay mid tayo leh oo wax badan ka qaban doono xaaladaha waddanka ka jira.
“Waxaan filayaa baarlamaankani inuu yahay baarlamaan aad u fiican, waxaan hubaa inuu noqon doono mid ku tallaabsada in isbedel uu Soomaliya gaarsiiyo iyo xasilooni siyaasadeed hadduu Alle idmo” ayuu yiri Prof. Jawaari.
Dhinaca kale madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo AMISOM ugu hambalyeeyay tallaabadii ay maleeshiyaadka Shabaab uga saareen magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose iyo deegaano kale, isagoo shacabka ugu baaqay inay ciidamada la shaqeeyaan.
Mogadishu, Somalia Naga soo wac halkan (Skype)